“အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´
Posted by ခင်ခ on May 23, 2013 in Creative Writing, Poetry | 22 comments
၂ တန်းအရွယ် ကျောင်းနေတော့ကွယ်
အထက်တန်းရောက် ၁၀ တန်းဖြေခါနီး
ဆယ်တန်းအောင်တော့ ဂုဏ်ထူး ၄ ဘာသာ
ကျွန်တော် အဌားကားယာဉ်မောင်း ဆိုလေသည်။
“သြော် အဖေရယ် ဘ၀ဆိုတာအခြေအနေ အချိန်အခါတွေပေါ်မှာလိုက်ပြီး နေထိုင်ရေးအတွက် အဆင်ပြေစွာ လုပ်ရကိုင်ရ ရှာရဖွေရ သေကြရတာပါလားနော်…………….။´´
(ကိုယ်တိုင်အတွေး ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်တိုင်ရေးပါ။)
သြော် .. အဖေ အဖေ .. အဖေ့စကား နားမထောင်ခဲ့တဲ့ သမီးမိုက် … အင်ဂျင်နီယာကြီးလုပ်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့မိတာ .. အခု တကယ် ခလုတ်ထိမှ အမိတဆိုသလို … ဆင်းရဲတွင်းနက်တော့မှ အဖေ့စေတနာ နားလည်ရပါပေါ့လား …
ဟား ၊ ဟား ၊ ဟား ။ မ Wei Wei ၊ စိတ်ညစ်နေပြီလား ။
တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ၊ ဒီနေ့ ၊ ကျနော့် သင်္ဘောပေါ်က Chief Engineer ကြီးလည်း ၊
အလုပ်တွေ အရမ်းများလို့ ၊ အရမ်း ပင်ပန်းလို့ ညည်းနေသံ ကြားရတယ် ။
အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်က မလွယ်ဘူးဗျ ၊ ကိုယ်တိုင် လက်ပါရတယ် ၊ ပင်ပန်းတယ် ။
Admin / Management Role ကတော့ Physically လူ နဲနဲ သက်သာတာပေါ့ဗျာ ။
၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးက အလုပ်ခေါ်တုန်းက အဖေက တားခဲ့ဖူးတာလေး သတိရလို့ ..
ဦးစွာအားပေးတဲ့ မမဝေရေ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်တော်ငယ်က သားကြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ အဖေကမေးတော ခေါက်ဆွဲကျော်ရောင်းမယ်ဆိုလို့
အဖေက သားရယ်ပညာတတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့။ အခုတစ်ခါတလေစိတ်ကူးပေါက်မိတယ် ခေါက်ဆွဲကျော် ထမင်းကျော် အဲလို စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်နိုင်ရင် ကောင်းမှာဘဲလို့လေ။
ငယ်ငယ်က ဖေဖေမေးတော့ ဖြေဘူးတယ် ..
သမီးကြီးရင် ဘာလုပ်မှလဲတဲ့ … မုန့်ဟင်းငါးချက်စားမှာပေါ့လို့ဖြေလိုက်တယ် ..
ခုအချိန်များမုန့်ဟင်းငါးလေးချက်ပြီး ဖေဖေ့ကို ကျွေးချင်လိုက်ပါဘိ …
မေဇူလိုင် မုန့်ဟင်းခါးဆိုလို့ သတိရသွားပြီး ညနေလဘက်ရည်သောက်ထွက်ရင်း မုန့်ဟင်းခါးလေး ၀င်စားလိုက်အုံးမယ်။ လက်ရှိ သမ္မတကြီးကတော်ကလည်း သမ္မတကြီးအနားယူရင် မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကား သတင်းဖြစ်ကာကျော်ကြားခဲ့သေးတယ်နော်။ မုန့်ဟင်းခါး ရဲ့ အရေးပါပုံလေးပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုကြီးမိုက် ဗိုလ်မှုးကြီးတစ်ယောက်တက်စီကားမောင်းလို့ အံသြပြီးရေးတာမဟုတ်ပါဘူး
သားကြီးလာရင်လုပ်မလဲ ငယ်ငယ်ကအမေးကို ကလေးဘ၀ ဖြေခဲ့တာနဲ့
တကယ့်လက်တွေ့ လူ့ဘ၀ဖြတ်သန်းတာ တစ်ခါတလေမတူနိုင်တာလေးကို
ငယ်တုန်းက ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ချင်တာပေါ့။
ကြားမှာ မက်ဒေါ်နယ်လ်မှာတောင် လုပ်ခဲ့သေး။
အခုတော့ ဘာထပ်ဖြစ်မယ် မသိ။
အရီးရေ ခင်ခ ငယ်ငယ်က ကြီးရင်ဘာလုပ်ချင်ဆို ခေါက်ဆွဲဆိုင်ဖွင့်ချင်ဖြေ။
လုပ်နေတာက construction နဲ့ နှီးနွယ်အလုပ်၊
အန်ကယ်ရေ…သမီးတော့ ငယ်ငယ်က .. ဘာလုပ်ချင်လဲ မေးတိုင်း ..ခဲတံနဲ့ စာရွက်တောင်းခဲ့တာချည်းပဲ … ။
လူကြီးတွေကတော့ .. အော… စာသင်ချင်တာလား .. ဆရာမဖြစ်ချင်တာလားပေါ့ .. အဟီး ..သူ့တို့အတွေးနဲ့ သူတို့ … ၊ ဂယ်တော့ .. အိုက်ကတည်းက …. ခဲတံနဲ့ စာရွက်တောင်းတာ ပုံဆွဲမလို့ပါ … ။ ဟိုခြစ်ဒီခြစ်ပေါ့လေ … ငယ်ငယ်ကတည်းက .. ။
အလယ်တန်းအထိ … ပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်ပြိုင် ၊ ပန်းချီတွေ ဆွဲ ၊ ပန်းချီကားတွေ စုတာမျိုးထိ .. လုပ်ခဲ့ဖူးလို့ ကြီးလာလျှင် ပန်းချီ ဆရာများ ဖြစ်မလားလို့ ကောက်ချက်ချပြန်တယ် … ။ ခိခိခိ…
အိုက်နောက်ပိုင်း အပျင်းထူပြီး ပန်းချီလည်း မဆွဲတော့သလို … ဆွဲချင်စိတ်လည်းမရှိ .. ဟုတ်တိပတ်တိလည်း ဘာမှ မဖြစ်ချင် …။
ခုအရွယ်မှာတော့ … အိမ်မှာ ကပ်စားတဲ့ … ငပျင်းကြီးပဲ ဖြစ်ချင်တော့တယ် … ။
အဲလာဆို မန်ဘာ ဝင်မလားဟင်။
မမက စတုပစ် အန် လေးဇီးကလပ်ရဲ့ ရာသက်ပန် ပလက်တီနန် မန်ဘာပါကွယ်။
ဖျင်းရ ပျင်းရတာများ နာမည်သာဆိုးတာ သိပ်သက်သာသကိုး။
ငယ်ငယ်က ကျောင်းဆရာမ၊ nurse တို့
ခုတော့ သင့်တော်မဲ့ အလုပ်မှာ ဝင်လုပ်ခဲ့တာ
၁၁ နှစ်တောင် ရှိတော့မှာပါလား……….
ကျုပ် သာ ဒီအက်စ်အေ ထဲ ရောက်ခဲ့ရင်
အစ်စရေး ခေတ် မို့ 
အခုချိန် ဆို ပြုတ်နေလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့ 
တက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ် စာဖတ် စာလေးပေလေးရေးမယ် လို့ဖြေခဲ့တာ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်လက်ရှိဘ၀ကို ပကတိအတိုင်းလက်ခံထားတော့
သေချာသွားတာတစ်ခုကတော့ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတဲ့ မနက်ဖြန်အတွက်
အဘဖေါ ရဲ့ ပြောရန် ခက်တဲ့ လောကဓံ ။
ငယ်ငယ်က ဖြစ်ချင်တာက စစ်သား ။
အခုတကယ် ဖြစ်နေတာက သင်္ဘောသား ။
နောင်ဖြစ်ဖို့များတာက မိန်းမ ထမိန်နား ခိုစား ။
ဟဲ ဟဲ ဟဲ ၊ ငါ့ ကဗျာလေး တယ်လှပါလား ။
အလင်းစက်တို့ ၊ မာဃတို့ ၊ ကဗျာ ပြခန်းမှာ မရွေးရင်တော့ ၊
ငါနှင့် အတွေ့ပဲ ။ ဟီ ဟိ ။
နောက်ဆုံး စာကြောင်းကို ကာရန် ပိုလှသွားအောင် ၊
” ဘုရားသား ” ( ရဟန်းတော် ) ဆိုပြီး ထည့်အုံးမလို့ပဲ ၊
ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပြီး ၊ ယုတ္တိ မတန်ဘူးလို့ ယူဆတာနှင့် ၊
ဖြစ်နိုင်ချေ များတဲ့ ” မိန်းမ ထမိန်နား ခိုစား ” ပဲ ထည့်လိုက်ရတယ် ။
ဟီ ဟိ ။ ငါ ဟဲ့ ၊ ကဗျာ ဆရာ ။
စာမတတ်တဲ့ ညီ ညမငယ်
က ကြီး ခခွေး သင်ပေးမယ်
ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ကဗျာလေးပါ ။
မေမေက ပညာတက်အောင်သင်လို့ ပဲပြောတယ်…ဘာလုပ်မလဲမမေးဘူး..ကျောင်းထားပေးတယ်.. ဆယ်တန်း မှာဆရာကအားလုံးကိုမေးတယ်..ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ..ဘာလုပ်ချင်လဲတဲ့.. ပြန်ဖြေ လိုက်တာက သိဘူးဆရာ ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ဆယ်တန်း အမှတ်စာရင်းထွက်ရင် သိမယ် အဲဒီ အမှတ်ပေါ် မူတည်ပြီးလုပ်မယ်လို့…ခုလည်းအဲဒီ အမှတ်ကဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ အတိုင်းပါပဲ..
ငယ်ငယ်က ဖြစ်ချင်တာ စာရေးဆရာမ
ခုဖြစ်နေတာ ကုန်လိုက်သယ်လိုက် ကုန်သည် တောက်တိုမယ်ရ။
နောင်ဖြစ်ဖို့များတာကတော့ သောမနဿသဟဂုတ်၊ကြက်သွန်ကြော်ကတစ်လုပ်တစ်ဆုပ် ဆိုတဲ့ အဘိဓမ္မာသင်တန်းသူ